प्रदीप बस्नेत काठमाडौं, २२ पुस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोमानी ढंगले निर्णय गरेको, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै संस्थापनइतर समूहले अहिले देशभरका नेता कार्यकतासँग छलफल सुरु गरेको छ । विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरूलाई काठमाडौं बोलाएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले आगामी दिनमा आइपर्न सक्ने सम्भावित राजनीतिक कदमका लागि परामर्श गरेको हो । केन्द्रीय समिति बहिष्कार गर्दै सभापतिहरूसँगको छलफल सुरु गरेपछि पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नेपाली कांग्रेसमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमबारे शिलापत्रकर्मी प्रदीप बस्नेतले युवानेता उदयशमशेर राणासँग कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, राणासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाली कांग्रेसको खास विवाद के हो ? संस्थापनइतर समूहले ४० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिलाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गर्नुपर्यो । अहिले पार्टीमा के भइरहेको यो ?
अहिले नेपाली कांग्रेसभित्रको गतिविधिले हामीलाई पनि निराश बनाएको छ । यो विवादले हामीहरू पनि खुशी छैनौ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा दुईवटा पार्टीहरू देखिएका छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस । यी दुई पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा छन् । नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति हेर्दा कहीँ कतै समस्या छैन । यदि भोलिको दिनमा कांग्रेसले सरकार चलाउने अवसर पायो भने हाम्रो नीतिको खास परिवर्तन हुँदैन ।
यसको अर्थ हामी राष्ट्रिय राजनीति, आर्थिक, सामाजिक तथा वैदेशिक सम्बन्धमा प्रस्ट छौं । पार्टीको माथिदेखि तलसम्मको निकाय सरकार कसरी चलाउने र देशलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने कुरामा कहीँ कतै समस्या छैन । तर, अर्कोतिर सत्तारुढ दल नेकपालाई हेर्ने हो भने ठूलो आइडोलोजिक संकटमा देखिन्छ । अर्थतन्त्र, परराष्ट्रनीतिमा समेत नेकपामा ठूलो अन्तरविरोध देखिन्छ । तर, हामीकहाँ सानोतिनो कुराले ठूलै महत्त्व पाएको छ । केही व्यक्तिगत विवाद तथा साना केही समस्याहरू देखिएर विवादजस्तो देखिएको हो ।
महाधिवेशन दुई महिनाअघि हुने या दुई महिनापछि हुने वा नेविसंघमा सात जना महामन्त्री हुने कि तीन जना हुने भन्ने विषय ठूलो होइन । पार्टी सभापतिदेखि वरिष्ठ नेता, महामन्त्रीलगायतले यी साना विषय पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले विवाद देखिएको हो । सबै पक्षको सुझाव लिएर पार्टी सभापतिले निर्णय लिने हो ।
यही निर्णय गर्दा प्रक्रियागत भएन, वरिष्ठ नेतादेखि महामन्त्रीसमेतलाई नसमेटी सभापतिले निर्णय लिएको कुरा डा. शशांक कोइरालाले पनि भन्नुभएको सुनियो नि ?
कुनै पनि विवादमा हामीले दुईपक्षीय रूपमा हेर्न आवश्यक छ । केही नेताहरूको माग बैठक बस्नुभन्दा पहिले अधिवेशनको मिति तोकिनुपर्छ भन्ने थियो । तर, मुख्य माग पूरा भइसकेपछि लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र बैठक बहिष्कार गर्नु ठीक हो त ? बैठकमा आफ्नो कुरा राख्ने, आफूलाई चित्त नबुझे नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने आदि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त बाँकी नै थिए ।
बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने त कारण थिएन । तर, यस्तो समयमा सर्वसम्मत निर्णय भएको राम्रो हो । पार्टी सभापतिदेखि शीर्षनेता सबैको कमजोरी देखिन्छ । केन्द्रीय समितिमा थुप्रै युवा नेताहरू हुनुहुन्छ । हामीहरूले पनि सर्वसम्मत निर्णयका लागि सघाउन सकिन्थ्यो ।
पार्टी सभापतिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा विधि, प्रक्रियासम्मत नगरेको, एकलौटी ढंगले पार्टी चलाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले ४० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो । पार्टीमा यो मतको कदर हुँदैन ?
वरिष्ठ नेताले विभिन्न पार्टी सभापतिलाई पठाएको म्यासेज मैले पनि हेरेको छु । उहाँले कुनै गुटको भेलाभन्दा सहकार्य कसरी गरेर जाने भन्ने म्यासेज पठाउनुभएको छ । तर, मेरो कुरा के हो भने वरिष्ठ नेता र उहाँनिकट नेताहरूले महाधिवेशनको माग पूरा भइसकेको अवस्थामा यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । विवाद केमा हो भन्ने खास कुरो नै बुझिएन ।
पार्टीमा विभागको संख्या बढाउने, पार्टीका विभिन्न भ्रातृ संगठन नेतृत्वविहीन छन् । नेविसंघ, तरुण दललगायतमा विवाद छ । यस्तो बेला शीर्ष तहमै यस्तो झगडाले तपाईंको पार्टी लोकतान्त्रिक नै हो भन्ने सन्देश जान्छ ?
पार्टीका विभागबारे ३ वर्षपहिले नै टुंगो लगाइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यतिबेला पनि सहमति जुटेन । सर्वसम्मत नहुने अवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र कुनै निर्णय नै नहुने भन्ने हुँदैन । संविधान पनि ९० प्रतिशत सभासदस्यहरूको सहमतिका आधारमा भयो । त्यहाँ पनि फरक मत राख्नेहरू थिए । संविधानतः बहुमतका आधारमा हरेक निर्णय हुने गर्छन् भने पार्टीमा सभापतिले निर्णय नै गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।
मेरो फेरि पनि जोड सर्वसम्मत निर्णय नै हुनुपर्छ भन्ने हो तर जसरी पेलेर गएको, सर्वसम्मतका लागि प्रयास नै नगरेको भन्ने आरोप छ, यो पनि सत्य होइन । यो कुरा म मान्दिनँ । पार्टी सभापति पक्षीय नेताहरूले कामै गर्न नदिएको, विवादै विवाद निकालेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई असफल बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाएको छ नि त ।
यो आरोप प्रत्यारोपले पार्टी विभाजन त हुँदैन ? वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. कोइरालालगायतले सभापतिको कार्यशैली ठीक नभएको भन्दै पार्टी विभाजनसम्मको चेतावनी दिएको सुन्नुभएको छ ?
हिजो पार्टी फुटेर हाम्रो हालत के भयो ? तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी विभाजन हुँदा के भोग्नुभयो, हामीले के भोग्यौं ? यसमा भनिरहनु परेन । त्यस कारण पार्टी फुट्ने अवस्था आउँदैन । शायद नेपाली कांग्रेस नफुटेको भए मुलुकमा तत्कालीन अवस्थाको द्वन्द्व पनि भित्रिँदैनथ्यो होला ।
पार्टी फुट्ने कुरा ब्याण्ड बाजा बजाउने र मिडियाका लागि खुराक हुन सक्ला, त्योभन्दा यसले कसैलाई फाइदा हुँदैन । विभाग भए पनि नभए पनि त्यो ठूलो कुरो भएन । अहिले बनाउन खोज्दा विवाद भयो भने विभागै नबनाउँदा पनि केही बिग्रँदैन । यसलाई पार्टी नेताहरूले जुँगाको लडाइँ नबनाउन मेरो आग्रह छ ।
यस्तो सुझाव पार्टी सभापतिलाई पनि दिने गर्नुभएको छ ?
मेरो आग्रह सभापतिलाई मात्रै होइन, सबै नेताहरूलाई हो । म पनि तरुण दलको अध्यक्ष भएको हुँ । कांक्रो चिरेको जस्तो थियो त्यतिबेलाको तरुण दल । २२ जना शेरबहादुर देउवा पक्ष र अर्को २२ जना सुशील कोइराला पक्षको सूूची दिइएको थियो मलाई । त्यस्तो तरुण दलको विवादरहित किसिमले सबै जिल्लामा अधिवेशन भएको छ ।
प्रक्रिया मिलाएर सबै विवाद समाधान गरिएको छ । आजको दिनसम्म कुनै पनि जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनेको छैन । गर्न सकिने रहेछ भन्ने त यो पनि उदाहरण हो ।
तपाईंले मिलाएँ भन्नुहुन्छ । त्यही तरुण दलमा महासचिवले अध्ययक्षलाई कारबाही गर्ने, अध्यक्षले महासचिवलाई कारबाही गरेको पनि देखिएको छ नि ?
यो समस्या अहिले आएको हो । मेरो कमिटीमा कुनै विवाद थिएन । त्यसैले मेरो आग्रह– हामी सबै लचिलो हुनुपर्छ । अहिले सबै नेताहरू हुनुपर्नेजति लचिलो नभइदिएर समस्या आएको हो । पार्टीभित्र दुईदेखि तीन प्यानल छ । एउटा प्यानलले अर्को प्यानललाई गाली गर्ने र अर्को प्यानललाई पूजा गर्ने चलन छ । म त्यो पक्षमा छैन ।
तपाईंहरूको प्यानल विचार समूह होइन नि, त्यो त गुट हो । विचार समूह र गुटमा त भिन्नता हुन्छ । कांग्रेस या नेकपा दुवैमा गुटगत शिकारको समस्या त उही हो ।
तपाईंले जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ । अरु देशमा हेर्दा पनि लगभग विचारसमूह भन्नुस् या आइडोलोजी भन्नुस्। या ग्रुप भन्नुस्, कुरो एउटै हो । समग्रमा हेर्दा सत्तारुढ दल नेकपामा जस्तो कांग्रेसभित्र समस्या छैन । सानो कुरालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा म्याग्निफाइङ ग्लासबाट धेरै ठूलो देखिएको मात्र हो । जुन हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो ।
सहमतिका लागि भन्दै पार्टी सभापति पौडेलनिवास पनि गएको देखियो । तर, सबै कुुरा निर्णय गरेर सभापतिले त प्रयास गरेका हुन् नि भन्ने पार्न यसो गरिएको हो भन्ने आरोप पौडेल पक्षको छ । तपाईंको पार्टीभित्र सभापतिनजिक रहेका केही एक/दुई जना जसले सभापतिलाई सल्लाह, प्रभावमा पार्ने हैसियत राख्छन् । तपाईंहरूको समूहभित्र केही त्यस्ता मान्छेहरू छन् रे नि ?
यो गलत कुरा हो । कुनै पनि हाम्रा नेताहरू चाहे जोसुकै गुटको भए पनि पार्टी नै बिग्रने गरी कसैले यस्तो काम गरेको छैन । सबैले मिलाउन खोजेको हो । नेतृत्व र शीर्ष नेताहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि अरुलाई दोष दिन मिल्छ ? म उहाँहरूको नियतमा शंका गर्दिनँ र क्षमता नपुगेकै हो । केही सार्थीहरूले सभापतिलाई गलत सल्लाह दिने गरेको भनेर बदनाम गर्ने काम गर्नुभएको छ, यो निन्दनीय छ ।
पार्टी सभापतिविरुद्धमा त अहिले शीर्ष नेताहरू पूरै लागेको देखियो नि । वरिष्ठ नेता पौडेलदेखि शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौलालगायतका थुप्रै नेताहरूले सभापतिको साथ छोडेको देखियो । यसबाट पनि सभापतिप्रतिको असन्तुष्टि उहाँको कार्यशैलीप्रतिको बिमति त हो नि ?
हो । सभापतिसँग धेरै नेताहरूले फरक मत राख्नुभएको छ । राजनीतिक दलभित्र यो धेरै नयाँ कुरा होइन । को कोसँग गयो, को आयो वा भोलिको दिनमा को सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने मुख्य कुरा होइन । नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता, सदनमा पार्टीको भूमिका कस्तो होला भन्ने मुख्य विषय हो ।
तपाईंहरूले त छाया सरकार पनि बनाउनुभएको छ । तपाईंहरूले निर्वाचनदेखि नै अधिनायकवाद आउने भो भन्ने गरेकोलाई चेक एण्ड ब्यालेन्सका लागि छाया सरकार बनाएको होला । तर, आफ्नै पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले छाया सरकारचाहिँ किन बनाएको होला ?
हाम्रो फोकस अर्कैतिर हुनुपर्ने हो । नेकपाले गरेका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापप्रति हामी फोकस हुनुपर्ने बेलामा हामी आन्तरिक विवादमा अल्झिएका छौं । यो सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको एउटा विभाग बनाउने कोसिस गरिरहेको छ । नेपाली सेनालाई प्रधानमन्त्री एक्लैले चलाउन खोजिरहनुभएको छ ।
त्यही भएर प्रतिपक्ष कमजोर भयो । संसदमा पनि प्रतिपक्ष देखिँदैन । आन्तरिक पार्टी राजनीतिमा पनि ऊ फसिरहेको छ । आज संसददेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँ छ कांग्रेस ?
सदनमा हामीले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो तर सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, सेनासम्बन्धी विधेयक रोकिएको कांग्रेसकै कारण त हो नि । गुठी बिलका बारे कसैलाई अत्तोपत्तो नै थिएन । त्यसलाई बहसमा ल्याएको त कांग्रेसले नै हो ।
हो, आन्तरिक रूपमा हामी अलमलिएका कारण हाम्रो भूमिका कमजोर भएकै हो । हामी कमजोर छैनौं, भोट बैंक जस्ताको त्यस्तै छ । चुनावमा मत घटेको पनि होइन । हामीप्रतिको फलोइङ बढिरहेको छ ।
तर त्यसलाई पुँजीकरण गर्ने, जनमतको कदर गर्ने, जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उभिने तपाईंको नेतृत्वको क्षमता छैन ?
हाम्रो अस्तब्यस्तता नै प्रमुख कारण हो । महाधिवेशन आउन एक वर्ष बाँकी छ तर हामीलाई केन्द्रदेखि जिल्ला, पालिका सबैलाई अधिवेशन लागिसक्यो । हाम्रो अलि बढी समय पार्टी व्यवस्थापनमा लागेकाले केही अलमल भएकै हो । पछिल्लो उपनिर्वाचनमा हाम्रो मत बढेको छ । हाम्रो मत बढेको कांग्रेसको कारणले मात्रै होइन । केपी ओलीका कारण हाम्रो मत बढेको हो । यसकारण उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ ।
नेपालको दुर्भाग्य, नेकपाको अकर्मण्यताको फाइदा कांग्रेसलाई, कांग्रेसको अकर्मण्यताको फाइदा नेकपालाई हुने देखियो । पार्टीले केही गर्नै नपर्ने भयो । तपाईं राम्रो गरेकाले छनोटमा पर्ने अवस्था नै आउने भएन ।
यसलाई यसरी पनि हेरौं । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको संविधान बनाउने उद्देश्य थियो । पहिलो सभामा तत्कालीन माओवादी ठूलो पार्टी बनेर आयो । कम्युनिस्टहरूको दुईतिहाइजस्तो शक्ति भयो । चार–चारवटा सरकार फेरिए । तर, संविधान बनेन । दोस्रो सभामा कांग्रेस ठूलो पार्टी भएर आयो । सबैलाई समेटेर भाषण गर्न नसक्ने सुशील कोइराला नेतृत्वमा संविधान आयो ।
त्यसपछि दुई दशकभन्दा बढी रिक्त रहेका स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघीय निर्वाचन पनि हाम्रै सरकारको पालामा भयो । यसकारण कांग्रेस पावरमा हुँदा फक्सन गर्न सक्ने रहेछ । विपक्षीमा बस्दा अलमलिने रहेछ । त्यसैले आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सरकार बनाउने मत दिएर पठाउनुस् । नेकपा विपक्षीमा बस्न सुहाउने पार्टी हो । विपक्षीमा बस्दा उहाँहरूले हामीलाई आच्छुआच्छु पार्नुहुन्छ । त्यसैले नेतृत्व गर्न कांग्रेस नै चाहिने रहेछ । कांग्रेसले दुःख त गर्छ, गरेको काम देखाउन सक्दैन ।
काम गरेको देखाउनै पर्दैन नि । आफैं देखिन्छ नि । जनताले मूल्याङ्कन गरिहाल्छन् नि । कसले कति काम गरेको छ भनेर बजारीकरण गरिरहनुपर्छ र ?
एकदमै पर्छ । यो त जरुरी रहेछ । पब्लिसिटी वा मार्केटिङ राजनीतिमा त एकदमै आवश्यक रहेछ । अहिले भारतमा हेर्नुस्, मोदीको मार्केटिङ मेसिनरीको प्रभाव, ट्रम्पलाई हेर्नुस् । मोदी आउनुभन्दा अगाडिको कांग्रेस सरकारको अर्थतन्त्रको ग्राफ हेर्नुस्, अहिलेको भारतको अर्थतन्त्रको अवस्था फ्याक्ट एण्ड फिगरमै हेर्नुस् न ।
हामीले सिंगो मुलुकको एक प्रकारका पुनर्संरचना त गर्‍यौं । तत्तपश्चात् राजनीतिक नेतृत्वमा पनि नयाँ र युवाहरूले राजनीतिमा, समाजमा, शासकीय संरचनामा पनि नयाँपन ल्याऊलान् भन्ने चाहना थियो । अहिले पनि तपाईं देउवाकै बचाउमा हुनुहुन्छ । नेकपाका युवानेताहरू पनि प्रचण्ड ओलीको बचाउमै देखिन्छन् । यसरी नेतृत्व पुनर्संरचना र हस्तान्तरण होला, हुँदै छ ?
मैले शेरबहादुर देउवालाई कसरी बचाएँ ? । दुई पक्षका नेताहरूको गल्ती छ । मैले नेताहरूलाई पनि भेटेर पनि भनिरहेको छु । बैठक बहिष्कार गरेर रामचन्द्रजीहरूले ठीक गर्नुभएको छैन । शेरबहादुरजीले पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु उनको कमजोरी हो भनेर दुवैतर्फका नेताहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु ।
यसरी म कसरी नेताहरूको बचाउमा लागें ? एउटा कुरामा म के प्रस्ट छु भने परिवर्तनका लागि नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ । कांग्रेस होस् या नेकपाको अहिलेको नेतृत्व, स्याचुरेटेड भइसके । अब युवा नेतृत्वको आवश्यकता छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २२, २०७६, ०५:२८:००